Uhlobo lweSistem ye-Energy Sistem 6 ukuphononongwa kweentloko | Zonke iinkonzo ze-intanethi
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izaziso, Reviews
Namhlanje sihamba kwakhona nenye ezona zinto zithengiswayo nezifunwayo kumaxesha akutshanje ngabasebenzisi be-smartphone, iiheadphone. Sifumana iintlobo ezininzi zazo kwimarike yangoku. Ngesi sihlandlo sikwazi ukuvavanya i Uhlobo lwe-6 ngokweSistim yaMandla kwaye iimvakalelo zilunge kakhulu.
Sibona indlela abasebenza ngayo bonke abenzi be-smartphone abasungule imodeli yee-headphone ezingenazingcingo. Isixhobo esonyukayo kwimfuno yayo enkulu. Ubukhulu becala, njengoko besesitshilo kwizihlandlo ezininzi, yokuthatha isigqibo ngobuninzi babavelisi, ukuhambisa ngejack port yee-headphone kuninzi lwee-smartphones ezintsha. Ukujongana nemfuno enkulu sifumana isibonelelo esinomdla.
1 Uhlobo lwe-Energy Sistem 6, enye indlela eya kwii-AirPods
2 Uyilo kunye neemilo zohlobo lwe-Energy Sistem 6
2.1 Uhlobo lwe-6s alufani nayiphi na
4 Itekhnoloji yokusika yeendlebe zakho
5 Isitayile se-Energy Sistem isitayile se-6 sentloko yeetekhnoloji
Uhlobo lwe-Energy Sistem 6, enye indlela eya kwii-AirPods
Ngenjongo yokubonelela ngemveliso ekwaziyo ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi. Kwaye ukuthobela imigangatho esemgangathweni yohlobo lophawu lwendlu, iSistem yaMandla isungula istifowuni ii-headphone eziyi-6.Isixhobo, ukongeza ekunikezeleni imbonakalo enomtsalane unayo izibonelelo ezisemgangathweni.
Mhlawumbi kunjalo Ukukhuphisana neApple AirPods ayisiyiyo eyona njongo iphambili Ngubani odala imveliso ekwicandelo elifanayo lentengiso. Kodwa nangona ngokungangqalanga, nayiphi na iseti yentloko ebluetooth enokubonelela ngenqanaba elifanelekileyo lamava omsebenzisi iyayenza. Ke ngoko, kuthathelwa ingqalelo izibonelelo ezinikezelwa ngohlobo lwesithandathu, kwaye unikwe iimeko eziba njalo imbangi yokuqwalaselwa. Ke ngoku ngoku ungathenga kwiAmazon ngexabiso elinokhuphiswano olukhulu.
Ukuba ngokomzimba sizithelekisa zombini ii-headphone iiyantlukwano ezininzi sifumene. Enye yezona zinto zicace gca ngumbono wee-headphone ngokwazo. ISistem yaMandla ine Inkqubo ye-intra-atrial, kwaye ke iimilo azihambelani. Awukho nomzimba ofanayo apho ibhetri kunye nemakrofoni zidityanisiwe.
Kuyabulelwa kakhulu ukuba ungafumani ikopi yeshumi elinanye yemodeli ye-Apple. Kwaye xa ujonga imigca eziyilwe ngayo, ngokobuhle sinobuganga bokuthi zintle nangakumbi. Nangona oku kuvavanyo lobuqu esingavumelani nalo.
Uyilo kunye neemilo zohlobo lwe-Energy Sistem 6
Njengoko besesitshilo, ukuba imbonakalo yomzimba yezi headphone "ayiphefumlelwanga" okanye ifana nee-AirPod sele zilungile. Intengiso igcwele iikopi kunye nokuphindaphindeka kwee-headphone ze-Apple. Uhlobo lweSistem ye-Energy Sistem 6 ine uyilo lwantlandlolo olunomtsalane emehlweni kwaye zijongeka zilungile ngokwenene endlebeni.
Ukuba ujonga ibhokisi yakho yeshaja, Siyabona ukuba ine ukuvulwa okufanelekileyo kunye nokuvalwa komazibuthe. Yakhelwe ngaphakathi umgangatho weplastiki ukubonelela nge ukujongeka kakuhle kunye nokuziva. Ii-headphone zihlala zikhona Izihlanganisi zemagnetic apho ibhetri ihlawulisiweyo xa sizigcina. Ukusuka fimilo yesikwere kunye nobukhulu obuncinci ungayithatha naphi na. Emqolo wayo sibona ukuba isixhobo sokutshaja luhlobo oluncinci lwe-USB.
Ngaphambili kwesicikoNgaphezulu ngentla yesiginitsha oyibonayo imingxunya emibini. Le mingxunya ibekwe ngokukuko ukuze ngabo sibona ukukhanya kwe-LED kwintloko nganye. Ukujonga ukuba bayabiza na okanye hayi. Inkangeleko etsala amehlo kodwa iluncedo ngokwenene.
Uhlobo lwe-6s alufani nayiphi na
Ukujonga kwii-headphones siyakubona oko kusesandleni zincinci kunokuba bekulindelwe. Sele sizibonile ezinye izixhobo ukuba kwiifoto sifumana umbono wobungakanani, kwaye xa sinethuba lokuzivavanya kubonakala ngathi zingaphezulu. Uhlobo lwe-6 lunesayizi enye, kwi indawo engaphandle kwendlebe wento engaphantsi kwe- 2,5 cm.
Zenziwe ngeplastikhi esemgangathweni. Kwaye siyathanda ukuyibona loo nto ayifakwanga nayiphi na into yerabha. Sikwazile ukubona indlela iirubbers ezixhathisa ngayo ukudlula kwexesha kwaye ziphelela ekubeni zincangathi. Ke ngoko, ukukhetha esi sixhobo ngu ukhetho olulungileyo oluya kuthi ngokungathandabuzekiyo lwandise ixesha lokuphila.
Intloko nganye ine ukukhanya kwe-LED encinci lonto isixelela ukuba zikhona nini ukuvumelanisa, xa zikhona idityanisiwe kwaye xa zikhona iyasebenza. Ukongeza, enkosi kwimingxunya ebhokisini yayo, sinokubona ukuba bayabiza na.
Njengoko besesitshilo, kwaye siyaphinda, sifumene ii-headphone nge imbonakalo enomtsalane. Inyaniso yokuba ayifani nayiphi na enye imodeli sele iluphawu loqobo kunye nesibindi kwaye sihlala sinjalo. Kwaye into ebalulekileyo, balinganisa kuphela i-4,5 gram ke awuyi kuqaphela ukuba uzinxibile. Ilungele ukwenza imidlalo ngaphandle kokuphazamiseka, kwaye loo nto ngoku ungathenga kwiAmazon ngaphantsi kwesiqingatha seendleko zee-AirPods.
Kwibhokisi ene imibala ecacileyo kunye nokuvalwa kwemagnethi kwisitayile esicocekileyo se-Energy Sistem. Ibhokisi enika umgangatho wezinto kunye nokuthuthuzela kokuvalwa kwayo kuya kusinceda ukuba sizigcine nanini na singazisebenzisi. Sifumana ii-headphone ezinikezelwe ngokwahlukeneyo kwibhokisi, ekwabonakala ngaphambili.
Sikwafumana ibhokisi encinci apho sinezinye imiyalelo esisiseko kunye nenye incwadana Ulwazi lwenkampani. A Intambo encinci ye-USB Ukuthwala ibhokisi esothusileyo yiyo imfutshane kakhulu. Y iiseti ezimbini zeepads ngobukhulu obahlukeneyo ukuze ufumane olona lufanelekileyo kwi-anatomy yakho yokuva.
Itekhnoloji yokusika yeendlebe zakho
Njengoko sisazi, esi sizukulwana see-headphone ezingenazingcingo sibonisa Itekhnoloji yenyani ye-Wireles Stereo. Yintoni eyenza, qhagamshela ngokuzenzekelayo kwaye uvumelanise omnye nomnye. Ukusebenzisa isitayile se-Energy Sistem 6, njengazo zonke, kuya kufuneka sizivumelanise kunye ne-smartphone yethu ngeBluetooth. Kwaye lo kuphela kwento oya kuyenza.
Enye yeenzuzo abanazo kukuba ukongeza ekubeni nebhokisi yeshaja, ezi zicima kwaye zivule ngokuzenzekelayo. Xa sivula ibhokisi, ii-headphone ziya kuqhagamshela ngqo kwisixhobo esidityanisiweyo. Ke xa siyibeka endlebeni sele idityanisiwe.
Xa uzifaka ebhokisiningelixa bahlawula, iseti yentloko icinyiwe ukuyeka ukusebenzisa ibhetri. Nangona ukubeka u-kodwa kukho into esingayithandanga. Asinalo ulwazi malunga nenqanaba lentlawulo yebhokisi. Ke sinokuzifumana ngaphandle kwebhetri kwii-headphone kwaye ngaphandle kwebhetri kwitshaja.
Intloko nganye ine iqhosha lomzimba, elingathambanga, esinokuthi ngayo senze imisebenzi eyahlukeneyo. Umzekelo, ngokucofa kwiqhosha lasekunene lendlebe kanye sinokunyusa ivolumu. Kwaye uyihlise ngokucofa iqhosha kwi-earphone yasekhohlo. Ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona zinto ziphosiweyo kwii-AirPods, ulawulo lwevolumu yokudlala kwakhona.
Ukwenza i- cofa kabiniNokuba yeyiphi kwii-headphone ezimbini, siya kuthi nqumama ukudlala umculo. Kwaye ukuyiphinda kwakhona kuya kufuneka siphinde kabini-kwakhona. Simele sitsho ukuba amaqhosha awanakulungelanga ukucofa. Kuya kufuneka sixhase ubhontsi ngasemva ukuze pulsation isebenze.
Isitayile se-Energy Sistem isitayile se-6 sentloko yeetekhnoloji
Umzekelo Isitayela 6
Te knoloji I-Stereo yenyani engenantambo ngoQhagamshelo olulula
Amaqhosha okudlala kwakhona SI
Ulawulo lwevolumu SI
Ukusebenza rhoqo 2 4 GHz
Amandla esiginali aphezulu <20 dBm
Amandla esandi aphezulu 3 mW
Ukungqinisisa 16 Ohm
Ibhetri yentloko 50 mAh nganye
Itshaja yebhetri I-300 mAh-iintlawulo ezintathu ze-headphones-
Ubungakanani befowuni X x 24 15 24 mm
Imilinganiselo yebhokisi yeshaja X x 42 36 28 mm
Ubunzima bentloko 4 iigrem nganye
Ubunzima beLoader I-31 gram
Ixabiso 59.90 €
Ikhonkco lokuthenga Uhlobo lweSistem yaMandla 6
Ubunzima bokukhanya kakhulu
Imiyalezo elishumi elinesibini
Asilazi inqanaba lentlawulo yebhokisi
Ukuchukumisa kunye nokucofa amaqhosha kukungonwabi
Amandla athile evolumu ephantsi ngengxolo yangaphandle
Uhlobo lweSistem yaMandla 6
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Uhlobo lweSistem yamandla eSistem 6 ukuphononongwa kweentloko
Ngoku kunokwenzeka ukuba udlale noThanos kuhlaziyo lwamva nje lwe-Fortnite